Aumônerie FJKM / Hafatra Fihaonambe 2017 . – FJKM
Aumônerie FJKM / Hafatra Fihaonambe 2017 .
‘ ‘Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika » II Tim 1: 8a
“ Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. ”Matio 25:40
Isaorana ny Tompo, ry havana, fa tanteraka soa aman-tsara taty amin’ny FJKM Ziona Vaovao Mahajanga, SP Boina Vaovao, ny Alakamisy 23 Novambra 2017 ka hatramin’ny Alahady 26 Novambra 2017 ny Fihaonambe faha-telon’ ny Aumônerie FJKM .Noho ny fitahiany dia nirindra soamatsara izany.
Tolorana fisaorana manokana ihany koa anefa ireo rehetra nandavorary sy nahatomombana izany antsakany sy andavany. Fankasitrahana feno no atolotra ny Sekretera Jeneraly sy ny Prezidà Synodaly SP Boina Vaovao izay tonga nanome lanja izao fihaonambe izao, toy izany koa ireo Tale sy Tonia tao amin’ny Sampana sy Sampan’asa ary Asa izay namaly ny fanasana. Isaorana koa ny Mpitandrina rehetra eto amin’ny SP Boina Vaovao ary indrindra ny Mpitandrina sy ny Birao ary ny kristiana rehetra eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao niaraka tamin’ireo Komity ny Fihaonambe teto an-toerana nikarakara sy nandray tamim-pitiavana tanteraka.
Fotoana izao, ry havana, anentanana antsika Fiangonana, Mpitandrina, Katekista Delege, Kristiana rehetra hanao ho zava-dehibe ny Asan’ny Aumônerie izay anisan’ny asa nataon’i Jesoa ho zava-dehibe tety an-tany ka mampandroso sy mampivelatra ny asa fiantrana sy fitaizam-panahy (I kor 13.3). Entanina ihany koa isika handray anjara mavitrika amin’ny fanatanterahana ny Tetikasa“Jacob project” ka hampiaty anaty fiaraha-monina ireo olona manana fahasembanana (OMF). Aoka ho tsaroantsika hatrany koa, ry havana, fa i Jesoa Kristy Ilay Aumônier no fianarana ho antsika ny amin’ny fiheverana ny hafa ary adidintsika FJKM araka ny Foto-dalana sy Fitsipika and. 33 sy ny Fitsipiky ny Aumônerie p.3 ny asa fanaovantsoa sy ny fiahiana ny mahantra eo amin’ny faritra misy ny fiangonana. Amin’izany dia aoka ho ataontsika ho zava-dehibe izao fomba fiasan’i Jesoa izao :
Ny olona no fototra sady ivon’ny asam-pamonjena notanterahan’ny Tompo.
Mihevitra manokana ireo rahalahy kely indrindra (mahantra, tra-pahoriana, mila vonjy)
Mifamatotra aina tanteraka amin’ireo rahalahy kely indrindra ny asa atao.
Mihevitra manokana ny madinika
Miasa amin’ny fitiavana sy amin’ny finoana ho an’ireo madinika.
Hotsaraina amin’ny asa vokatry ny finoana isika.
Ho fehin’ireo dia tokony ho tsaroana hatrany fa hotsaraina amin’ny asa vokatry ny finoana isika. Manaitra antsika kristiana rehetra ho amin’ny fanajana ny zon’olombelona, na iza na iza io ary na aiza na aiza. Ampahafantarina isika Fiangonana fa efa mijoro sy tafapetraka ara-dalàna eo anivon’ny ambaratongan-drafitra ny asan’ny Aumônerie, koa irina indrindra ny hijoroan’izany koa eny anivon’ny Synodamparitany rehetra. Farany, tapaka taty Mahajanga, ry havana, fa ny Fihaonambe faha-efatra amin’ny taona 2019 dia hatao any Toamasina, koa am-pitiavana no iantsoana antsika kristiana rehetra mihitsy sy ny fiangonana hanatrika izany fa tsy ireo Aumônier ihany. Ampiomanina sahady araka izany isika fa hisy fiantsoana solontena isam-pitandremana hiatrika izany indrindra ireo vaomiera sosialy ao amin’ny fiangonana. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra !
Ny Vaomieran’ny hafatra :
RALAMBOMANANA Heriniaina, Mpitandrina
RAZANAKINIAINA Violette, Mpitandrina
TSIRIMPANAHY Henintsoa, Mpitandrina
Ny Mpandrindra Nasionaly,
SEFALA/ 10Taona maha-Tale Nasionaly